30 Bere a Dawid ne ne mmarima no reba Siklag,+ da a ɛto so abiɛsa no, Amalekfo+ bɛfow anafo fam ne Siklag, na wɔbɔɔ Siklag de ogya hyewee, 2 na wɔfaa mmea+ ne biribiara a ɛwɔ hɔ nnommum, efi akumaa so kosi ɔkɛse so. Wɔankum obiara, na mmom wɔtwee wɔn sii kwan so kɔe. 3 Bere a Dawid ne ne mmarima no baa kurow no mu no, hwɛ, na wɔde ogya ahyew, na wɔn yerenom ne wɔn mmabarima ne wɔn mmabea nso, wɔafa wɔn nnommum kɔ. 4 Ɛnna Dawid ne nnipa a wɔka ne ho no maa wɔn nne so sui+ kosii sɛ wɔannya ahoɔden ansũ bio. 5 Dawid yerenom baanu no, Yesreelni Ahinoam+ ne Abigail,+ Karmelni Nabal yere no nso, na wɔafa wɔn nnommum kɔ. 6 Dawid ho hiahiaa+ no papaapa efisɛ nnipa no kae sɛ wobesiw no abo;+ wɔn nyinaa bo fuwii,+ wɔn mmabarima ne wɔn mmabea no nti. Na Dawid hyɛɛ ne ho den Yehowa, ne Nyankopɔn mu.+ 7 Ɛnna Dawid ka kyerɛɛ Ahimelek ba ɔsɔfo Abiatar+ sɛ: “Mesrɛ wo, fa asɔfotade+ no bra me nkyɛn.” Na Abiatar de asɔfotade no baa Dawid nkyɛn. 8 Na Dawid bisaa Yehowa+ sɛ: “Mintiw afowfo yi anaa? Mɛto wɔn?” Ɛnna ɔka kyerɛɛ no sɛ:+ “Tiw wɔn, na wobɛto wɔn, na ogye nso, wubegye.”+ 9 Ɛhɔ ara na Dawid sii kwan so, ɔne mmarima ahansia+ a wɔka ne ho no, na wɔkɔe ara koduu Besor subon no ho, na mmarima a wɔantumi antoa so no gyinae. 10 Na Dawid ne mmarima ahanan toaa so tiw+ wɔn, na mmarima ahanu a wɔabrɛ a wɔantumi antwa Besor subon+ no gyinae. 11 Na wohuu Egyptni+ barima bi wɔ wuram hɔ. Enti wɔfaa no kɔmaa Dawid, na wɔmaa no paanoo dii, na wɔmaa no nsu nomee. 12 Wɔsan maa no borɔdɔma a wɔabɔ no tɔw ne bobe tetare+ abien. Na odii, na ne honhom+ san baa ne mu, efisɛ na onnidii na ɔnnom nsu nnansa, awia ne anadwo. 13 Ɛnna Dawid bisaa no sɛ: “Hena nipa ne wo, na ɛhe na wufi?” Na obuae sɛ: “Meyɛ akoa a mifi Egypt, Amalekni bi akoa ne me, nanso me wura agyaw me ha efisɛ nnansa ni a meyaree.+ 14 Yɛn na yɛkɔfow Keretifo+ anafo fam ne Yuda asase ne Kaleb+ anafo de ogya hyew Siklag no.” 15 Ɛnna Dawid bisaa no sɛ: “Wubedi m’anim de me akɔ afowfo no nkyɛn?” Na ɔkae sɛ: “Ka me ntam+ Onyankopɔn din mu sɛ worenkum me, na worenyi me nhyɛ me wura nsa,+ na medi w’anim akɔ afowfo no nkyɛn.” 16 Ɛnna ɔde no sian kɔe,+ na asade pii a nkurɔfo no akɔfa afi Filistifo asase so ne Yuda asase so no nyinaa nti,+ ná wɔatow pon sensam fam hɔ nyinaa redidi nom na wɔregye wɔn ani.+ 17 Na Dawid kunkum wɔn fi anɔpahema kosii anwummere, na ɔsɛee wɔn; wɔn mu biako mpo anka,+ gye mmerante ahanan na wɔtenatenaa yoma so guanee. 18 Na Dawid gyee nea Amalekfo no fae+ nyinaa; Dawid yerenom baanu no nso, ogyee wɔn. 19 Wɔn nsa kaa wɔn biribiara, efi akumaa so kosi ɔkɛse so, wɔn mmabarima ne wɔn mmabea ne asade no ne nneɛma a wɔfae no nyinaa.+ Dawid gyee biribiara. 20 Enti Dawid faa wɔn nguan ne wɔn anantwi nyinaa, na wɔde wɔn dii wɔn mmoa no anim bae. Ɛnna wɔkae sɛ: “Dawid asade ni.”+ 21 Dawid beduu mmarima ahanu+ a na wɔabrɛ a wɔantumi ne Dawid ankɔ a wɔma wɔtenaa Besor subon ho no nkyɛn, na wofii adi sɛ wɔrebehyia Dawid ne nnipa a wɔka ne ho no. Bere a Dawid bɛn wɔn no, obisaa wɔn sɛnea wɔn ho te. 22 Nanso mmarima a wɔne Dawid kɔe no mu nnipa bɔne ne ahuhufo+ no kae sɛ: “Wɔne yɛn ankɔ nti yɛremma wɔn asade a yɛakogye no bi, gye obiara yere ne ne mma na yɛde wɔn bɛma wɔn na wɔadi wɔn anim akɔ.” 23 Ɛnna Dawid kae sɛ: “Me nuanom, monnyɛ nea Yehowa de ama yɛn+ no saa, efisɛ wabɔ yɛn ho ban+ de afowfo a wɔbaa yɛn so no ahyɛ yɛn nsa.+ 24 Hena na ɔne mo bɛyɛ adwene asɛm yi ho? Sɛnea wɔn a wɔkɔɔ ɔsa no bi kyɛfa te no, saa na wɔn a wɔtenaa nneɛma ho+ no nso kyɛfa bɛyɛ. Obiara benya bi.”+ 25 Efi saa da no, ɔde yɛɛ ahyɛde ne atemmude+ wɔ Israel de besi nnɛ. 26 Bere a Dawid beduu Siklag no, ɔde asade no bi kɔmaa Yuda mpanyimfo a wɔyɛ ne nnamfonom+ no sɛ: “Hwɛ, Yehowa atamfo mu asade a wɔde rebɛkyɛ+ mo ni.” 27 Ɔde bi kɔmaa wɔn a wɔwɔ Betel,+ ne wɔn a wɔwɔ Ramot+ a ɛwɔ anafo fam, ne wɔn a wɔwɔ Yatir,+ 28 ne wɔn a wɔwɔ Aroer, ne wɔn a wɔwɔ Sifmot, ne wɔn a wɔwɔ Estemoa,+ 29 ne wɔn a wɔwɔ Rakal, ne wɔn a wɔwɔ Yerameelfo+ nkurow mu, ne wɔn a wɔwɔ Kenifo+ nkurow mu, 30 ne wɔn a wɔwɔ Horma,+ ne wɔn a wɔwɔ Borasan,+ ne wɔn a wɔwɔ Atak, 31 ne wɔn a wɔwɔ Hebron,+ ne wɔn a wɔwɔ mmeae a Dawid ne ne mmarima no kyinkyinii hɔ no nyinaa.